Shiinaha 2019 Tartanka 808nm Diode Laser Nidaamka Timo Goynta Degdegga ah ee DY-DL102 Soo-saar iyo Warshad | Daanye
Tamarta iftiinka waxay si toos ah ugu shaqeysaa unugyada timaha ee maqaarka maqaarka, waxayna ka saartaa melaninta unugyada timaha follicle iyada oo aan waxyeello u geysan maqaarka caadiga ah iyo qanjidhada dhididka, taas oo markaa lagu gaarayo timo joogto ah. Ma jiro xanuun, raaxo, tiknoolajiyadda ugu amniga badan hadda aduunka.
Tikniyoolajiyadda saarista timaha laser-ka ee loo yaqaan 'Diode laser laser' waxay ku saleysan tahay isbedelka xulashada ee iftiinka iyo kuleylka. Aaladda laser-ka ee loo maro dusha sare ee maqaarka si loo gaaro xididka xididdada timaha; iftiinka waa la nuugi karaa loona rogi karaa kuleylka dhaawaca unugyada timaha follicle, si markaa dib u soo cusbooneysiinta timaha iyada oo aan wax dhaawac ah ka gaarin unugyada ku hareeraysan. xanuun fudud, qalliin fudud, kan ugu amniga badan, tikniyoolajiyadda timo-ka-saarista joogtada ah hadda.
Cabirka mashiinka L45 * W33 * H29
Miisaanka saafiga ah 17kgs
Hore: 2020 tayada ugu sareysa ee 808nm diode laser-ka mashiinka saarista DY-DL4A
Xiga: Qiimo Jaban oo Taariikhi ah 808nm Diode Laser Nidaamka Timo Goynta Degdegga ah DY-DL201